भीडको भरपर्दा धोका खाएकाको सुझावः रवि लामिछाने पत्रकार नै ठिक ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
भीडको भरपर्दा धोका खाएकाको सुझावः रवि लामिछाने पत्रकार नै ठिक !
११ भदौ, काठमाडौं । आफ्नो पछिल्तिर दुईचार जना मान्छे भए भने त्यो मान्छेको सानै ठूलो हुन्छ । समाजमा पनि उसलाई राम्रै दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ, गाउँको मुखिया जस्तो उसले जे भन्यो त्यहि अन्तिम सत्य हुने गर्छ । तर त्यतिमै रमाइरहेको मान्छेको पछाडी जव एउटा ठूलो भीड नै लाग्छ त्यो मान्छेमा अनेक आकांक्षा पलाउनु अस्वभाविक होइन ।
त्यस्तै चर्चा अहिले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको समर्थनमा उत्रिएकाे भीडकाे भइरहेको छ । आफ्नै पूर्व सहकर्मी शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरेको मुद्दामा लामिछाने ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर चितवन जिल्ला अदालतबाट सोमबार थुनामुक्त भए । उनी १० दिन प्रहरी हिरासतमा बस्दा चितवनमा उनका समर्थकहरुले व्यापक प्रदर्शन गरे ।
प्रदर्शनमा आएकाहरुलाई धन्यवाद दिन मंगलबार आयोजित सभामा उत्रिएको भीडलाई देखेर रविलाई राजनीतिमा तान्ने काम भइरहेको छ । उनले पनि राजनीतिमा आउन सक्ने संकेत गरेका छन् । उनले पनि त्यसैलाई बल पुग्नेगरी भनेका छन्, “राजनीतिमा आउन चुकुल लागेको मात्रै हो ताल्चा लागेको छैन ।” यसले उनी चुनावका बेला कुनै पनि क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिन्न । तर भिडकै भरमा चुनाव लडेका एकजनाले रवि राजनीतिमा आउने भएपछि भीड र चुनावको सम्बन्ध खुलाउँदै आफ्नै पीडा उदाहरणस्वरुप पस्किएका छन् ।
सामाजिक अभियन्ता निलकण्ठ पौडेलले फेसबुकमा रविलाई भीडको भर नपर्न सुझाएका छन् । रविले राजनीति गरेर यो भीड जम्मा भएको होइन, त्यसैले रवि पत्रकार नै ठिक हुने उनको तर्क छ । उनले आफूले भाषण गरिरहेको भीडको फोटो सहित लेखेका छन्, “साँझ ६ सय भोट आउँछ भनेर ढुक्क भएर सहमति गरेर हिँडे राति विपक्षीबाट भैंसि नै ढालिएछ त्यहाँबाट १० भोट आयो ।”
Previousमोदीले खबर गरे ‘संविधान दिवसको दिन नेपाल आउँदिन’
Nextअष्ट्रेलियामा नेपालीको यस्तो काण्ड, अदालतद्वारा दोषी ठहर